अत्यन्तै दु:खद खबर: रातिको १० बजे घट्यो एस्तो घटना, एकै परिवारका ३ जनाको मृत्यु ! – Khabar28media
अत्यन्तै दु:खद खबर: रातिको १० बजे घट्यो एस्तो घटना, एकै परिवारका ३ जनाको मृत्यु !
September 18, 2021 - by Vikash - LeaveaComment
बर्दियामा बँदेललाई मा ‘र्न राखेको विद्युतीय करेन्टको पा’ ‘सोमा परेर एकै परिवारका तीन जनाको ज्या’न गएको छ । बँदेल मा’र्नका लागि राखेको क’रेन्टकाे पा’साेमा परेर ठाकुरबाबा-३ का ३२ वर्षका बालकृष्ण थारु, उहाँकी श्रीमती २९ वर्षकी सुनिता थारु र बालकृष्णकी भाउजु ४३ वर्षकी
बेलमती थारुको ज्या’न गएको बर्दिया प्रहरीले जनाएको छ । गएराति १० बजेतिर एक जनालाई क’रे’न्ट लागेको र बचाउने क्रममा अरु दुई जनालाई पनि करेन्ट लागेर ज्या’न गएको हो । पा’ ‘सो थाप्ने ८३ वर्षका राजबहादुर शाहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
धानबालीमा जङ्गली हात्ती, बँदेल लगायतका वन्यजन्तुले क्ष’ति पुर्याउन थालेको भन्दै क’रे’न्ट धानबालीमा जङ्गली हात्ती, बँदेल लगायतका वन्यजन्तुले क्ष’ति पुर्याउन थालेको भन्दै क’रे’न्ट प्र’वाह गर्दा यसअघि क’रेन्ट ला’गेर दुई वटा हात्ती र एक जना युवाको ज्या’न गएको थियो ।
अवश्य पढ्नुहोला, पेटको वरिपरिको बोसोले धेरैलाई तनाव दिएको छ । घटाउने मन हुँदा हुँदै पनि परिस्थिति र समय नमिलेर धेरैलाई समस्या परिरहेको छ । यो बोसो घटाउनका लागि यस्तो चिज जरुरी छ, जसले बढी भन्दा बढी क्यालोरी बर्न गरोस् । केही सजिला तरिकाहरु यसप्रकार छन् ।
काँक्रो: बेलुकाको खाना खानुभन्दा पहिले काँक्रोको जुस वा सलाद खानुहोस् । यो पेटका लागि धेरै लाभदायी छ । यो सेवनका कारण धेरै खाना खानबाट जोगिन सकिन्छ नै, यसले पेटको झाडुको काम पनि गर्छ । जसले गर्दा बिस्तारै बोसो कम हुन्छ । धनियाँको जुस: यसमा क्यालोरी निकै
कम पाइनछ भने एन्टीअक्सिडेन्टको मात्रा धेरै हुन्छ । यसको प्रयोगबाट अरु कुनै समस्या आउँदैन । यसले किड्नी ठिक राख्न समेत सघाउँछ। एलोभेरा जुस: एलोभेरा जुस धेरै बिरामका लागि उपयोगी ठानिन्छ । दिनमा एक कप यसको जुस पिउँदा पेटको बोसो कम हुन्छ। यसले कोलेस्ट्रोलको
समस्या पनि घटाउँछ। ग्रिन टी: ग्रिन टीमा एन्टिएक्सिडेन्ट्स हुन्छ । पेटको बोसो घटाउन भने विना चिनीको ग्रिन टी पिउँदा फाइदा हुन्छ । यसले शरीरमा रहेका विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्न पनि सघाउँछ । त्यसैगरी कागती मिसाएर खाँदा टक्सिनबाट पनि छुट्कारा मिल्छ।
अदुवाको रस: प्रतिदिन एक चम्चा अदुवाको रस पेट कम गर्नका लागि धेरै सहयोगी हुन सक्छ । यसले शरीरको बोसो समेत बर्न गर्न सघाउँछ खानपानमा सन्तुलनसँगै नियमित व्यायाम फिट रहने सबैभन्दा उत्तम उपाय हुन् । त्यसकारण यी खानेकुरासहित नियमित व्यायाममा पनि ध्यान दिनुहाेला ।
Previous Article ९ महिनाकी ग’र्भवती भनिएकी महिलाको पे’टमा एस्तो अनौठो भेटे पछि डाक्टर समेत च’कित (भिडियो हेर्नुस्)
Next Article बुहारी बनेको ९ वर्षपछि पेट दुखेर अस्पताल जाँदा सपरिवार छक्क, चिकित्सकको समेत होस उड्यो !